Bursaray | RayHaber | raillynews
Cudurka loo yaqaan 'corona virus', oo ah ajandaha dalkeena iyo sidoo kale adduunka oo dhan, ayaa indhaha waxaa loo rogay gaadiidleyda dadweynaha. Gawaarida Magaalada Bursa ee Magaalada Burulaş Basaska, halkaas oo boqolaal kun oo rakaab ah lagu qaado maalin walba, BursaRay, T1 iyo T3 [More ...]
Waxay u egtahay xarig filim… Waan ku faraxnay markii aakhirkii Ekrem Barışık uu sharraxay in shaqadu bilaabeen inay u guuraan nidaamka tareenka ee gaadiidka magaalooyinka. In kasta oo dabayaaqadii Teoman Özalp uu qaaday tillaabadii ugu horreysay, waxaan la wadaagnay bayaankii Cavit Çağlar ee ahaa “Waxaan xallinay dhibkii deynta” iyada oo la mid ah tii xiisaha lahayd ee uu u hayey Madaxa Gobol ee xilligaas. Kadib… mudadii Erdem Saker, Bursaray [More ...]
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Caalin Alinur Aktaş wuxuu cadeeyay inay diyaar garow ugu jiraan inay bixiyaan dhamaan lacagaha xawaaladaha ee dhijitaalka ah. [More ...]
Ma fududa in la beddelo magacyada dadka lagu dhex abuuray, laakiin waxaa muuqata inay lagama maarmaan tahay. Sababtoo ah magaca mid ka mid ah degmooyinka xariiqyada tareenka loo qaybiyey laba saldhig ayaa horeyba u ahaa baahi weyn. Waxbadan oo Bursaray [More ...]
Agenda Gaadiidka Guud ee Bursa 'Gaadiidka Dadweynaha iyo Nono Node'
Waxaan aragnay in… 1984-1989 muddada Golaha Dawladda Hoose ee Bursa ay ahayd golaha ugu wax soo saarka badan abid. Markii hore, dadaalada xalka dhibaatooyinka taraafikada iyo gaadiidka ayaa la sameeyay mudadaas markii Ekrem Barışık uu ahaa madaxweynaha isla markaana la soosaaray mashaariicda gaadiidka. Xitaa ... [More ...]
30 August Agoosto ee Bursaray!
30 waa 97 ee Maalinta Guusha ee Agoosto. Waxaa abaabulay Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa sababtuna tahay sanadguuradii bandhiga ayaa dhaqaaqay rakaabkii Bursaray. Fiidiyowga lagu wadaago ciyaartoy warbaahinta bulshada ee Bursaray 30 Agoosto rakaabka iyo wacyiga rakaabka [More ...]